Sunifiram (DM235) powder (314728-85-3) hplc =98% | AASraw Nootropics
/ Products / Nootropics powder / Sunifiram (DM235) upfu
Rating: SKU: 314728-85-3. Category: Nootropics powder
MUTSVENE unobatsira nekugadzira zvigadzirwa kubva ku gram kusvika kuhuwandu hweSilifiram (DM235) powder (314728-85-3), pasi peCGMP mutemo uye nehutsika hwehutano hwehutano hwehutano.
Sunifiram (DM235) video yepoda
Molecular Kurema: 309.33
Sunifiram (DM235) poda muhuropi inowedzera kushandiswa
Sunifiram powder, DM235 powder ine zita rekutengeserana seBisfluoroModafinil, Flmodafinil.
DM235 powdha inova inoverengeka, yakakura zvikuru neotropic uye AMPAkine-yakafanana pamwe ne cognition-enhancing zvinowanikwa mumhuka dzemhando.
Sunifiram powder is piperazine ine zvimwe zvakafanana zvakagadzirwa piracetam. Piracetam yakagadzirwa nehutachiona hwehutachiona hwakafanana nehutachiona hweAlzheimer, uye Sunifiram powder inozivikanwa kuti iwedzere kugadzirisa maitiro mune mamwe maitiro ekuzvibata. Muchikoro chinosunga zvidzidzo, Sunifiram yakasakara pfumbi haina kuratidza kufanana kwevakawanda neurotransmitter receptors kana mitsara (hapana ukama pa 1μM ye serotoninergic, dopaminergic, muscarinic, nicotinic, adrenergic, glutamatergic, histaminergic, opioid, kana gABAergic receptors), asi rinokurudzira kusunungurwa kwe acetylcholine kubva kumatare cerebral cortex, zvichida kuburikidza nehuwandu hwemagadzirirwo eAmPA receptor response.
Sunifiram powder inodzivirira amnesia inokonzerwa ne scopolamine, mushure me ip uye po manejimendi, mune mbeva yekungodzivirira bvunzo ine shoma dhizaini ye0.01 mg / kg po Iyo antiamnesic mhedzisiro yeSunifiram poda yakaenzana neiyo inoitwa inozivikanwa inozivikanwa nootropic zvinodhaka zvakaita sepiracetam. (30 mg / kg ip), aniracetam (100 mg / kg po) uye rolipram (30 mg / kg po), asi iine potency chiuru - zviuru gumi zvakapetwa.
Yambiro paDM235 powder madhara
Sunifiram powder (DM-235) inonzi piperazine yakagadzirwa kemikemikari inobatsira zvinopesana neamnesiac mukudzidza kwemhuka zvine simba rakanyanya kupfuura piracetam. Sunifiram pfumbi yakasvibiswa isero re molecular simplification ye unifiram. Kubva pane in vitro uye zvidzidzo zvemhuka, zvinoratidzika kuti Sunifiram powder inoshanda nema AMPA-receptor activation.
Sunifiram pfumbi yakasakara inobata nekubvumira AMPA receptors; izvo zvinoreva, zvipiko zvakagadziriswa zvakakonzera kupindirana kwekushandiswa kwema-synaptic munharaunda yepamusoro yenheyo. Zvigadzirwa zvaro zvinowedzera phosphorylation ye AMPAR neNMDAR kuburikidza neprotini kinase activation, iyo inowedzerawo nguva yakareba inokwanisa - kureva, kukurudzira mukutumidzwa kwemashoko pakati peeuroni mbiri inokonzerwa nekusimudzirwa pamwe chete.
Iyo kinase activation iyo inokonzerwa neSilifiram powder inovandudza kukanganisa kwepfungwa. Uyezve, Sunifiram yakasvibiswa pabasa inoberekwa muchepereti yemhuka yekuongorora mhuka kuburikidza nekubatsira mukubudiswa kweacetylcholine, iyo organic molecule iyo inoshanda seyourotransmitter mune boka rezvipenyu zvakasiyana-siyana. Aya maitiro ekushanda anoita kuti Sunifiram powder iite anti-amnesiac.
Sunifiram powder inogonawo kudzivirira amnesia inokonzerwa neanicotinic anopikisa mecamylamine, GABAB agonist baclofen, α2 agonist clonidine uye mutauriri we AMPA anokwikwidza NBQX mumusana wekudzivisa kudzivirira.
Muchengetedzo yeakate yemvura yeMar Morris, kutungamirirwa kwe scopolamine kunodzivisa kuderedzwa kwekudzivirira latency mune zvose kugamuchira uye kuchengetedza kushandura kuedza. Sunifiram pfumbi yakasvibiswa, inotungamirirwa 20 min mushure mekudzidziswa kwemazuva ose kwekutsvaga, inogona kudzivirira scopolamine-induced memory kuora mwoyo pa 0.1 mg / kg ip
Sunifiram powder inobereka maitiro anonyanya kurwisa maitiro uye zvinogadziriswa pasina kushandiswa kunooneka muitiro wakakomba wemakonzo kana rats, uye pa 0.1 mg / kg ip, Sunifiram poda inoderedza nguva yehutachiona inokonzerwa nepentobarbital mumakonzo pasina kuchinja nguva induction ye hypnosis. Uyezve, mitezo inobatwa ne Sunifiram yakasvibirira yakasungira kuchengetedza motokari mukati mekuedza kwetambo. Izvo zvinoshandiswa zvinoshandiswa nemakonzo, zvichiongororwa nemagetsi eAustx, pamwe nemafambiro ekuongorora, kuongororwa nebhokisi-kuongorora kwebhodhi, zvichengetedzeka mushure meSaifiram powder administration.
Sunifiram pfumbu yakasviba inogadzirisa cholinergic kutumirwa mu cerebral cortex yekusununguka kwemakonzo pachena. Sezvinoratidzwa ne microdialysis zvidzidzo, Sunifiram powder inokwanisa kuwedzera kusunungurwa kweAAC pamwero we0.01 mg / kg, uye ine simba rinopfuura Unifiram.
Kuonekwa kwekaku hippocampal zvimedu kune 100 μM NMDA inoda kuwedzera kwe [3H] NE (48). Mhedziso yeNMDA inonyanya kudziviswa ne100 μM kynurenic acid (KYNA). Kuwedzerwa kwe nanomolar concentrations ya Sunifiram yakasvibiswa pfumbu inoshandura zvakanyanya KYNA kupikisa. Izvozvo zvinokonzerwa neSilifiram powder inodzivirira-(EC50 0.1 μM) uye inenge yakakwana pa 1 μM.
Kubatanidzwa kweAMPA receptors kunogona kuongororwa kuburikidza nekushandiswa kweAQUPA receptor antagonist NBQX. Kana yakashandiswa pa5 μM, NBQX inodzivirira [3H] NE kusunungurwa kunokonzerwa ne AMPA (100 μM), asi kwete 100 μM NMDA-mediated tritium kusunungurwa kubva kumakumbo hippocampal slices (48). NBQX, isingashandisi payo, inopikisa Sunifiram yeupfu kuchinja kweKYNA kupikisa kweNMDA-evoked tritium kubudiswa, zvichiratidza kubatanidzwa kweAMPA receptors mumigumisiro ye Sunifiram powder.
Zvinofadza kuti, pasi pemamiriro ezvinhu akadai, Sunifiram mishonga yakakosha yeupfu yakawedzera PKCa (Ser-657) nemabasa eSrc (Tyr-416) mabasa ane bhenji yakafanana-yebhande-mhinduro yekuita seyese yeLPP, inofamba pa 10 nM. Kuwedzera kwephosphorylation yePKCa (Ser-657) uye Src (Tyr-416) yakakonzerwa neSayifiram powder yakadziviswa nehutano hwe7-ClKN. Kuwedzera kweSPP ne Sunifiram yakasvibirira yakasvibiswa zvikuru ne PP2, Src mhuri inhibitor.
Pakupedzisira, apo inotangaidzwa nekanyanyisa ye glycine (300 lM), Sunifiram mishonga yekurapa yakakundikana kuunza LTP munharaunda yeC1.
Kutorwa pamwe, humwe huri pamusoro apa hunoratidza kuti Sunifiram yakasvibiswa pfupa inokurudzira glycine-binding site ye NMDAR neine PKCa inoshandiswa kuburikidza neSrc kinase. Kuvandudzirwa kwePKCa zvinoita kuti zviitiko zvivepo zvingangoita hippocampal LTP kuburikidza neC CaMKII activation.
Sunifiram (DM235) Yakawandisa Poda
Nzira yekutenga DM235 powder: kutenga Sunifiram powder kubva kuAASraw
1.Kutaurirana nesu ne email yedu
yekubvunza system, kana online skype
Mutariri wevashandi (CSR).